Holmes Fiber စီးပွားရေးဇုန်အစည်းအရုံး | Holmbygden.se
Facebook မှာ PA Holmes Fiber
ဘို Lindroos 070-696 53 40, Stefan Edin 073-070 34 40. E-mail ကို: holmfiber@gmail.com
14/3 -17: နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖိုင်ဘာအချိန်! – ကမ်းလှမ်းမှုကို t.o.m. 31/3!
15/12 -16: ဆုံးဖြတ်ချက်များ: Holmes ဖို့ဖိုင်ဘာအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့အကူအညီ!
30/1 -16: Holmes Fiber ၏ထူးခြားသောအစည်းအဝေး
10/5 -15: Holmes Fiber နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး: နောက်ဆုံးပေါ်သတင်း Read!
28/10 -14: Holmes Fiber - တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ!
17/1 -14: Holmes Fiber: အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားဘို့အင်ဖိုအစည်းအဝေး
8/12 -13: Sundsvall Tidning အတွက် Holmes Fiber
30/11 -13: Holmes ဖိုင်ဘာအသင်းအဖွဲ့ join နှင့်ဖိုင်ဘာဘရော့ဘန်းဖို့အခွင့်အလမ်းများ!
19/10 -13: Holmes ဖိုင်ဘာစီးပွားရေးဇုန်ဒြပ်ပေါင်း
14/6 -13: ဖိုင်ဘာဘရော့ဘန်းများအတွက်ယခုသင့်အကျိုးစီးပွားမှတ်ပုံတင်မည်! အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းကိုလေ့လာပါ!
* = လိုအပ်ပါသည်လယ်ပြင်
zip code နဲ့မြို့:
အခြားရွေးချယ်စရာဖုန်းကို (t.ex. နေအိမ် / အလုပ် / စီးပွားဖက်):
သတ်မှတ် "အိမ်ရာ" တစ်စုံတစ်ဦးကပိုင်ဆိုင်အပေါ်မှတ်ပုံတင်လျှင်.
OBS! Medlemsavg. (100:-) နှင့်årsavg. (100:-), စုစုပေါင်း 200:- BG မှပေးဆောင် 500-0229.
သတင်းအချက်အလက်များ OM Holmes Fiber
ကျနော်တို့အနာဂတ်၌အကြှနျုပျတို့၏ဇာတိမြေအသက်ရှင်ရန်ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိမြေဖို့အရေးပါသောအဘရော့ဒ်ဘန်းကွန်ယက် access ကိုရလိမ့်မည်ကြောင်းသေချာစေရန်တိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်ကိုတင်ပြခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုခငျြ. ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများနှင့်မြေးများနှင့်အခြားသူများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လှပသောဇာတိမြေအတွက်အသက်ရှင်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးစေခြင်းငှါကျွန်တော်တို့ကိုစို့.
အစောပိုင်းအောက်တိုဘာလတွင် 2013 Holmes Fiber စီးပွားရေးဇုန်အသင်းကိုဖွဲ့စည်းခဲ့စီမံကိန်းပြေးရသော. အဆိုပါအလုပျစီမံကိန်းများတွင်ပါဝင်အရှေ့ပိုင်းနှင့်အနောက်ပိုင်းJämtland Medelpad အတွက်Holmsjönန်းကျင်ကျေးရွာများအိမ်ခြံမြေနှင့်အခြားစစ်ဆင်ရေးပေးအာရုံစိုက်နေသည်. အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့အကြီးအကျယ်အလုပ်၏ပစ်မှတ်များမှာသမျှသောကျေးရွာများသို့ဆက်ဆံမှုရှိသည်သောလူများပါဝင်သည်.
ကျနော်တို့အခုက start ကူးမြောက်ခြင်းနှင့်ယခုဖြစ်ပျက်နေသည်ကျနော်တို့စီမံကိန်းထွက်သယ်ဆောင်ရန်အပ်နှင်းထားရမည်တဲ့သူအပေါ်ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်ပေါ်ရှိရာအချို့သောစနစ်များပေးသွင်းနှင့်အတူဟောပြောချက်ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါစီမံကိန်းကိုအခြားသူတွေအကြား၏အပေါ်လည်းဖြစ်ပါတယ်. ထောက်ပံ့ငွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရန်အဘို့အကောင်တီတွင်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့နှင့်စိုက်ပျိုးရေး၏ဘုတ်အဖွဲ့လျှောက်ထားရန်.
ကျနော်တို့စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်Holmsjönန်းကျင်အိမ်ခြံမြေသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခြားအမျိုးအစားများကိုအသကျရှငျသို့မဟုတ်ရှိသည်သောသင်တို့ရှိသမျှကိုပူဇော်. အဆိုပါအသင်းအဖွဲ့ကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသမျှသောဂုဏ်သတ္တိများပါဝင်ပါသည်နှင့်အသင်းအဖွဲ့ရန်အဖွဲ့ဝင်ကြေးနှင့်နှစ်စဉ်ကြေးပေးဆောင်. အဆိုပါအဖွဲ့ဝင်ကြေးဖြစ်ပါသည် 100:- နှင့်နှစ်စဉ်ကြေးဖြစ်ပါသည် 100:- တနည်းစုစုပေါင်း 200:-. လောလောဆယ်ကျနော်တို့နီးပါးရှိ 200 ဒါကြောင့်အသင်းအတွက်အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များတက်ရောက်သူသည်ကောင်းနှင့်ကျွန်တော်အလုပ်၏အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. အပြုသဘောများမှာ.
OBS! သင်ကအသင်းအဖွဲ့ join အခါ, သငျသညျစီမံကိန်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ဖြည့်စွက်ဖို့မသဘောတူပေမယ်သင်တို့သည်နောက်တဖန်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ထွက်သွားချင်ချင်သည့်အခါဒါမှသင်ကကျနော်တို့ကစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းအလုပ်အတွက်အသုံးပြုနည်းလမ်းသည်အဖွဲ့ဝင်ကြေးဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမနှစ်စဉ်ကြေး regains. သင်နှင့်အတူရှိဖို့အန္တာရာယ်တစ်ခုတည်းသောအရာ 100:-.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်အတူဖြစ်လူတိုင်းအဘို့ဖြစ်၏. အလုပ်အသင်းအားလုံးအတူတကွလာမှယခုအထိကျွန်တော်အဖြေတစ်ခုပူဇော်နိုင်မတိုးတက်ပြီးတော့နှစ်ဦးစလုံးဘဏ္ဍာရေးအစီအမံများနှင့်အလုပ်၏သင့်လျော်သောအမူအကျင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးအဆိုပြုဖြေရှင်းချက်ကိုကမ်းလှမ်းအဖြစ်. ပြည်နယ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအဖွဲ့ဝင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရဘရော့ဘန်း install လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျဆင်းမှုနှင့်ဒြပ်ပေါင်း၏ခြေလှမ်းနှင့်၎င်း၏အခွန်အခ recover ရန်ရှိမရှိအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကြာ.
စသည်တို့ကိုအိမ်နီးချင်းများ, မိတ်ဆွေများအိမ်ပိုင်ရှင်, စကားပြော, လူတိုင်းနှင့်အတူဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိကြောင်းသေချာ.
ကျနော်တို့စဉ်ဆက်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာနှင့်သက်ဆိုင်ရာများမှာအခြားဖိုရမ်များအပေါ်အခြားအမှုအရာတို့တွင်အသတင်းအချက်အလက်အထဲကပယ်ရှင်းမည်. အကြှနျုပျတို့သညျဤသတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်မျှဝေချင်. သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူထိတွေ့ရချင်ပါတယ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ e-mail လိပ်စာသို့ရေးနိုင်ပါတယ် holmfiber@gmail.com ဒါမှမဟုတ်ဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းထောက်များအပေါ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုခေါ်, အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်ကိုကျနော်တို့နောက်ပိုင်းမှာ add ပါလိမ့်မယ်.
Holmes Fiber ဘုတ်အဖွဲ့များအတွက်
Stefan Edin အားဖြင့်
Kortare stopp kan förekomma i samband med sandupptagni... ဆက်ဖတ်ရန်